प्लेनबाट रुख, लिक्विड स्प्रेले चुरेका चिरा टाल्ने ?
धर्मरत्न श्रेष्ठ- - - -
महाकाली सन्धि पास भयो, हरेक नेता नेपालको सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्दै थिए, माधवकुमार नेपालले भने अब नेपालले विजुली स्याटेलाइटबाट बेच्छ, नेपालको व्यापक प्रगति हुन्छ भनेका थिए । त्यो महाकालीपछि टनकपुर सन्धि भयो, नेपालका ठूला नदीनालामा भारतले लाइसेन्स लिएर कब्जा गरिरहेको छ । महाकालीको डीपीआरसम्म बन्न सकेन । आज कुनै नेता यसबारे मुख फोरेर बोल्दैनन् ।
नेपालका पहाड नाङ्गो भयो भन्ने चिन्ता सबैले गरे । त्यति नै बेला आजका ठूला भनिएका नेताहरुले भनेका थिए– हवाईजहाजबाट नाङ्गा पहाडहरुमा बृक्षारोपण गरिनेछ । राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले चुरे संरक्षणका लागि गुरु योजना नै सुरु गराए तर यिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरुले चुरे संरक्षणका बजेट लुड्याँए, चुरेको गर्नुसम्मको दोहन गरिरहेकै छन् । यसपल्ट वातावरण अध्ययन गरेर गिटी, ढुङ्गा भारत निकासी गरेर भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरियो । के चाहियो, जो चुरे दोहन गरिरहेका थिए, तिनले राजनीति गरे । सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन यही विषयलाई लिएर झ्याली पिटिरहेका छन् ।
जुन पहाडले देशलाई केही दिदैन, जुन पहाड फोर्दा वातावरणमा ठूलो प्रभाव पार्दैन, जनतालाई नोक्सान गर्दैन, ती पहाड फोर्दा किन आपत्ति ? वातावरणकै नाम दिएर चोभारको हिमाल सिमेन्ट कारखाना र गोदावरीको मार्वल कारखाना बन्द गराइयो । ती कारखाना बन्द हुँदा ४ हजारले रोजगारी गुमाए । राजधानीको वातावरण कति सुध्रियो, वातावरणको चिन्ता गर्नेहरु बागमती, टुकुचामा कालोपानी, कालो लेदो किन बग्छ ? कहिले हेरेका छन् ? यो त नागरिक समाजले नागरिकका दैनन्दिनका समस्याका बारेमा बोल्न छाडेर ओली सरकारले प्रतिगमन गरेको व्यानर बोकेर बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेजस्तो निम्छरो कुरा भएन र ?
सरकार पनि उस्तै छ । नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्– नारदमुनी राना । उनले पहिलो भाषणमै भनिदिए– ‘लिक्विड स्प्रे’ गरेर चुरे पहाडमा परेका चिरा टालिन्छ । पहाडमा परेका चिरा टाल्ने नारदमुनी रानासँग कुन प्रकारको सुपर ग्लु छ ? उनले यस्तो ग्लुको कहिले आविस्कार गरे । हावादारी कुरा गर्न नेपालका नेताहरुलाई कसैले सिकाउनै पर्दैन । बोल्न पायो कि अन्टसन्ट बोलिहाल्छन् । कम्तिमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ज्ञान भएकालाई त मन्त्री बनाउनु नि ।
ती मन्त्री भन्छन्– ‘चुरे संरक्षणका लागि एउटा नयाँ मेकानिज्म रहेछ, लिक्विड स्प्रे पाइँदो रहेछ त्यसले चुरेमा परेका चिरालाई टाल्दो रहेछ, थुन्दो रहेछ, पानीको सिपेजलाई कन्ट्रोल गर्दोरहेछ । त्यस प्रविधिलाई हामी प्रयोगमा ल्याउँछौंं ।’
मन्त्रीलाई नै थाहा छैन, सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने क्षेत्र कुन हो । चुरे नै हो भन्ने होइन । सरकारले भनिसकेको छ, चुरेको संरक्षण गरिनेछ, वातावरणको अध्ययन गरिनेछ र वातावरणविदहरुको सुझावका आधारमा निर्णय लिइनेछ । जे कुरालाई पनि सतही विरोध गर्ने र राजनीतिक मुद्दा बनाइहाल्नु गलत हो । यो सरकार जाला, अर्को सरकार बन्ला । आजका मन्त्री भोलि सडकमा आउनेछन्, आजका सडकका भोलि मन्त्री बन्नेछन्, यसैगरी हल्का विरोध गरिरहँदा देशको उन्नति कसरी सम्भव छ ?
कोरोनाको विपतका बेलामा हरेक पार्टी, हरेक नेताको विषय जनताको जीवनयापन हुनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुविधाको हुनुपर्छ । आफू बच्ने र जनतालाई बचाउने कुरा छाडेर राजनीतिक झगडामात्र गर्नाले जनताका विषय छायाँमा परेका छन्, जुन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सराप बन्नपुगेको छ ।